शिक्षकको अवकाशित सुविधासँग जोडिएको अन्यौल – Dullu Khabar
७ श्रावण २०७८, बिहीबार ०९:३९
सरकारी सेवामा निश्चित उमेरसम्म मात्र बहाल हुन सकिने भएकाले उमेर हदको धेरै महत्व हुन्छ । यसले गर्दा सबै सरोकारवालाहरूको यस विषयमा यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ प्रारम्भ हुनु अगावै भएका विज्ञापनबमोजिम ऐन प्रारम्भ भए पश्चात् नियुक्त स्थायी शिक्षकले नेपालको संविधानको धारा ३०४ (१) को आधारमा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ११३,११५,११६,१२२ समेत बमोजिमका सुविधा पाउने या नपाउने ? यदि नपाउने भएमा शिक्षकलाई योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेटिने कानुन कहिले बनाइ लागू गर्ने ? यसतर्फ सबै सरोकारवालाको र जिम्मेवार पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ । साथै मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट यस अन्यौल हट्ने लिखित सूचना प्रकाशन भएमा हजारौं शिक्षकलाई सजिलो हुनुको साथै पेशागत क्षमता समेत अभिवृद्धि हुनेछ । (उज्यालाेबाट साभार गरिएकाे)